Carp yegolide | Ngeentlanzi
Kwintlanzi yokuqala endandinayo, i Carp yegolide ibisoloko ingoyena uhlala ixesha elide (kwitanki yeentlanzi, iminyaka emi-3). Yenye yeentlanzi uninzi lwabazali oluthengela abantwana babo ngaxa lithile ebomini babo. Ewe kunjalo, kukho inyani yokuqonda ukuba ifile kwaye iyabaleka iyokuthenga intlanzi entsha phambi kokuba abantwana bafumanise ukuba ifile, zingaphi izihlandlo oomama nootata bethu besenza loo nto kuthi?
Kwaye kukuba ikhaphethi yegolide, enye yezona ntlanzi zithandwayo eJapan nase China kwaye eyinxalenye yamachibi amaninzi, inokuba yeyona ibalaseleyo kwaye, enyanisweni, ayisiyiyo into yokuba baninzi abanokukhetha emanzini abandayo. Ezi ntente zinokuba mhlophe, golide (orenji) okanye tyheli kodwa neminye imibala kwaye ukuba banendawo bayakhula kakhulu (kwaye ayinakulunga kwi-aquarium ngokwayo ngenkathalo oyinika yona). Ngayiphi na imeko, iintlanzi zikhula kuphela xa zinendawo yokukhula, xa zingenjalo, ukukhula kwazo kuyacotha okanye kuyeke.
El ikhaphethi Kungekudala, uzolile kwaye uyadlala xa unokuzithemba nomnini wakho. Batya amatyeli ambalwa ngemini (ukutya okhethekileyo kubo) kodwa bayathanda nokutya isonka amaxesha ngamaxesha (bayakuthanda kakhulu oko).
Ngexesha le ukuzalela Azikho lula, ubuncinci kwii-aquariums, kodwa zinokwenziwa kwaye zihlala zenzeka entwasahlobo xa kukho utshintsho ngesiquphe kubushushu apho abesilisa baqala ukugxotha abantu ababhinqileyo.
ukuba bahlule Kukho izikhokelo ezininzi ezinjengombala (ukuba uyakhanya uyindoda), inani (ukuba lijikelezwe ngakumbi ngamaphiko amancinci libhinqa), okanye ukubachukumisa kodwa oko akukhuthazwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Carp yegolide
Molo, ndinentlanzi ye-carp yesiqhelo engazi ukuba inantoni, ndicinga ukuba iyagula, intloko yayo ihlala ikhazimla imhlophe kodwa ibomvu kwaye nomsila wayo ocacileyo kunye nomhlophe ubomvu, ndingenza ntoni ukunceda yiyo?